နုပျိုတဲ့အသားအရေကဲ့သို့ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် CAUDALIE ရဲ့ Premier Cru the Serum! | CosmeticMyanmar
Home » Article » နုပျိုတဲ့အသားအရေကဲ့သို့ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် CAUDALIE ရဲ့ Premier Cru the Serum!
Beauty တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ ဒီနေ့မှာတော့ Beauty တို့အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Anti-Aging Serum လေးတခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် CAUDALIE ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်သီး အနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ Vinergy မှာ မျက်နှာပြင်အတွင်းပိုင်းဆုံးပိုင်းအထိ ဆဲလ်များ ပြန်လည်နိုးကြားလာစေရန် အစွမ်းသတ္တိများ ပါဝင်ပါတယ်။ Resveratrol + Micro Hyaluronic Acid အမျိုးအစားဟာ မျက်နှာပြင်ရှိ အရေးအကြောင်းများ ချောမွတ်လာစေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အပြင် အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမဲစက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေရန်အတွက် Viniferine, အရေးအကြောင်းတွေကို တွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာ ဆရာတဆူဖြစ်တဲ့ Polyphenols နဲ့ ရေဓာတ်ကို အပြည့်အဝပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တဲ့ Hyaluronic Acid တို့လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ အသားအရောင်ကို အဓိကပြန်လည်ထိန်းညှိပေးဖို့ရန်အတွက် White Peony ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။
သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင် အသားအရေအတွင်းပိုင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ထိထိရောက်​ရောက် ကုသပေးနိုင်တာကြောင့် အရည်အသွေးအားဖြင့် အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ Product ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ နေ့​ရော ညပါ အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တဲ့ အပြင် အသားအရေမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Serum လေးကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သိသိသာသာ အရေးအကြောင်းများသက်သာလာပြီး Skincare Product တွေ အသုံးပြုတဲ့အခါ ပိုမိုထိရောက်လာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အကယ်၍ အရေးကြောင်းကုသဖို့ရန်အတွက် အဓိကထားအသုံးပြုချင်ရင်တော့ CAUDALIE ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Cream ကိုတွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေအပေါ်မှာ Serum ပမာဏ အနည်းငယ်စီယူပြီး Moisturizer အသုံးမပြုခင် မျက်နှာ အတွင်းပိုင်းမှ အပြင်သို့ ဆွဲကာ အသုံးပြုရပါမယ်။ မျက်ဝန်းတဝိုက်နဲ့ Smile line လေးတွေ သက်သာစေနိုင်ဖို့ရန်အတွက် လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေကို အသုံးပြုပြီး စိမ့်ဝင်သွားအောင် အသာအယာ ပုတ်လိမ်းပေးရပါမယ်။
ဝယ်ယူရရှိလိုပါက CAUDALIE Myanmar မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး Branded Online Shopping တို့မှတဆင့် ဆက်သွယ်မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၅၀ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Image source: www.us.caudalie.com
Tags: CreamySerumSkin Care